Tanzania oo ciidamo saaraysa maraakiibteeda si ay uga hortagto burcad badeeda – SBC
Tanzania oo ciidamo saaraysa maraakiibteeda si ay uga hortagto burcad badeeda
Xukuumada Tanzania ayaa sheegtey inay ciidamo oogada u saarayso maraakiibteeda xambaara Gaaska & Saliida si ay uga hortagto kooxaha shufto badeeda Soomaalida.
“Si looga hortago kor u kaca weerarada burcad badeeda waxaan sharciyeynay sare u qaadida amaanka xuduudaheena” sidaasi waxaa baarlamanka wadankaasi ka sheegay Ra’isalwasaaraha Tanzaniya Prime Minister Mizengo Pinda.
“Talaabada koowaad waa inaan saarno ciidamo galbiya maraakiibta inaga codsada saacida xaga amaanka ah, marka ay soo gaaraan xuduud badeedkeena, tan labaadna waa in dawladau ay sugto amaanka doonyaha ku hawlan hawlaha soo saarista saliida & gaaska xeebaha badaheena” ayuu hadalkiisa ku darey Ra’isalwasaaraha Tanzania.
Tanzaniya waxaa ka diiwan gashay 17 shirkadood oo ku hawlan hawlaha soo saarista saliida & gaaska wadankaasi waxaana shirkadaasi ka mid ah Canada’s Artumas Group Inc (AGI) oo laga leeyahay Canada, Maurel & Prom oo laga leeyahay Faransiiska, Norway’s StatoilHydro oo laga leeyahay Norwayd, ASA, Shell International iyo Ras al-Khaimah Gas Commission oo laga leeyahay wadanka isu taga Imaaraadka Carabta.
Burcad badeeda hubaysan waxay ka sameeyeen malaayiin doolar madaxfurshada ay ka helaan maraakiibta ay qabsadaan kuwaasi oo ay qaarkood ka qabsadeen xeebaha koonfurta jasiirada Seychelles iyo waliba bariga Hindiya.
Pinda wuxuu sheegay in xukuumadiisu ay xabsiga dhigtey 11 nin oo lagu eedeynayo inay yihiin burcad badeed kuwaasi oo uu sheegay inay ka qabteen xeebaha wadanka Tanzaniya haatana cadaalada uu la soo taagi doono sida uu sheegay.